Xarkada mujaahidiinta al shabaab oo gurmad kii ugu ballaarnaa kasameeyay gobalada bay iyo bokool | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Xarkada mujaahidiinta al shabaab oo gurmad kii ugu ballaarnaa kasameeyay gobalada...
gurmadka abaaraha xarakada Shabaabul mujaahidiin ayaa sare u qaaday howlaha ay ugu gurmanayaan dadka ku ceyrtoobay abaartii ku dhufatay gobolada dhaca Koonfurta sanadkii lasoo dhaafay kuwaasi oo aan heysan xoolo ay dhaqdaan.
Wilaayada Bay iyo Bakool ayaa lasoo sheegayaa in gurmadkii ugu xooganaa lageeyay, weriyaal ka socda warbaahinta gudaha iyo tan dibadda oo uu kujiro wakiil wareedka warsom ee gobalada bay iyo bakool ayaa gaaray goobaha gargaar bixintu ka socoto si ay Indhahooda ugusoo arkaan waxqabadka Mujaahidiinta.
Dadka manta wax loo qeebiyay ayaa gaaraya 2,000 oo qoys iyagoo lasiiyay raashin dhan min 60KG iyo caag saliid ah waxaa sidoo kale qoysaska lasiiyay qalabka wax lagu beerto iyo maacuun si ay uga kaaftoomaan gacan hoorsiga.
Saraakiisha guddiga gurmadka abaaraha ayaa mashquulsan wax u qabadka dadka tabaalaysan ee saameeyay abaraha.
Previous articleciidamo katirsan xarakada mujaahidiinta al shabaab oo gaaray deegaana galgala ee gobolka bari
Next articleRa`iisal wasaaraha somaali ameyrikaanka gaas oo booqday dhaawacyada ciidamada shisheeye ee amisom